अक्टोबर ७ मा शुरू भएको दौंतरी आज सय दिन पुगेको छ। इन्टरनेटमा भएको सानो भला कुसारीबाटै एउटा गतिलो ब्लगको शुरुवात गर्ने बिचार निस्किएको थियो। सारा विश्वमा छरिएका नेपालीको भावानत्मक समबन्धबाट दौंतरीको जन्म भएको थियो। साधारण रुप बाट अहिलेको बिकसित रुप दौंतरीकै प्रयासले सम्भव भएको हो। यसरी बिकास हुने क्रममा राम्रा नराम्रा दुबै कुरा हामिले भोग्यौं र असल कुरालाइ आत्मसात गर्दै अघि बढ्नेछौ भन्ने आशा लिएको छु। एउटा सबल ब्लग बन्न पक्कै पनि मिहेनेत र समय चाहिन्छ , त्यसैले बिचलित नभैकन हामी सफलताको बाटो तिर लाग्दै जानुपर्दछ। आजको दिन सम्म आइपुग्न हरेक ठाउंबाट सहयोग गर्ने समस्त दौंतरीलाइ दौंतरी परिवारको तर्फबाद क्रितग्यता ब्यक्त गर्न चाहान्छु र आगामी दिनहरुमा यस्तै सहयोग गर्दै जानुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु। तपाइहरु आफ्ना कुरा राखेर,खुशी बाडेंर दौंतरीलाइ असल ब्लग बनाउन सहयोग गर्नुहोस।
शुभ-कामना दौतरीलाई :)
I am sorry, due to lack of time I couldn't contribute anything on this big day but would like to wish this platform to grow bigger and better every day.
tapai ko big day ko lagi pani badhai.
हजुरहरुलाइ मेरो पनि शुभकामना छ। राम्रो गर्दैजानुस,प्रगतीको कमना छ।